Soomaali ku guuleystay baqtiyaa nasiibka US - BBC Somali
Soomaali ku guuleystay baqtiyaa nasiibka US
24 Jannaayo 2015
Bakhtiyaanasiibka lagu magacaabo Green Card Lottery, waa mid si nasiib ah sanad walba ilaa konton kun oo qof oo bulshooyinka caalamka ah ay ku galaan dalka Mareykanka, kuwaas oo marka ay Mareykanka galaan xaq loo siiyo in ay shaqaysan karaan.
Bulshooyinka caalamka oo dhan ayaa dalbada, balse dadka qaar waxa ay u tahay fursad aan wax la siisto jirin.
Waxaa dadkan ka mid ah Cabdi Nuur, oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi nasiib u helay in loo qaado dalka Mareykanka.
Ka hor intii uusan helin bakhtiyaanasiibka ee uu sugayay fursadda iyo kaddib-ba, ayaa qadka telefoonka waxay ku xiriiri jireen weriyayaha BBC Leo Hornak, oo warbixintan ayuu ka diyaariyay. Ku soo dhawaada warbixinta oo uu inala socodsiinayo Cabdiraxmaan Koronto.